Hawlgab - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Hawlgab
Haddii aad Finland hawlgab ku noqoto, waxaad heli kartaa hawlgabka shaqada ama hawlgabka qaranka iyo kabka lacagta hawlgabka. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan hawlgabyada kala duwan ee loogu talaggalay xaaladaha nololeed ee kala duwan.
Nidaamka hawlgabka ee Finland
Waddanka Finland waxaa ka jira laba nidaam oo hawlgab ah oo sharciga ku salaysan oo midba midka kale dhammaystiro:
Hawlgabka shaqada (työeläkkeet) hawlgabka noocan ah qofku wuxuu ku heli karaa inuu ka shaqeeyo shaqooyin mushaar lagu qaato ama uu ganacsade yahay. Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah inuu shaqaalihiisa oo dhan geliyo caymiska hawlgabka, uuna bixiyo kharashka caymiska.
Hawlgabka qaranka iyo kan damaanada (kansaneläkkeet ja takuueläke) waxaa loogu talagalay dadka hawlgabka ah ee aan lahayn hawlgabka shaqada ama caddadka hawlgabkooda shaqadu yar yahay.
Labada nidaam ee hawlgabkuba waxay leeyihiin nooca hawlgabka waayeelka iyo nooca hawlgabka awood la’aanta shaqo. Waxaad heli kartaa hawlgabka bulshada, haddi aad buuxisay 65 sano. Da'da aad jirto markaad lacagta hawlgabka heleysid waxay ku xirantahay hadba sannadka aad dhalatay. Ka fiiri da'da hawlgabkaaga nuqulka waraaqaha hawlgabka shaqada ama xafiiskaaga arrimaha hawlgabka. Qofka aan shaqada awoodin xanuun awgiis wuxuu heli karaa hawlgabka awood la’aanta shaqo kan hawlgabka waayeelnimada ka hor.
Qofka hawlgabka ah wuxuu sameyn karaa shaqo haddii uu doonayo. Haddii aad ku jirto hawlgabka waayeelka, shaqada waxa kaa soo gala saameyn kuma lahan cadada lacagta hawlgabka ee lagu siiyo.
Finland lacagta hawglabka waxaa laga bixiyaa Canshuur.
Shaqo-bixiyayaasha iyo shaqaaluhuba waxay wadajir u maalgelinayaan ammaanka hawlgabka shaqada. Shaqo-bixiyuhu wuxuu shaqaalaha mushaarkiisa ka jaraa qeybta uu bixinayo shaqaaluhu kadibna wuxuu ku daraa qeybtiisa oo u sii shubaa xafiiska hawlgabka.
Caddadka uu le'eg yahay hawlgabka shaqadu wuxuu ku xiran yahay, hadba dhirirka waqtiga aad shaqayneysay in uu le'eg yahay iyo sidoo kale caddadka mushaarka aad qaadatay inta uu le'eg yahay. Shirkadaha caymiska hawlgabka shaqada, qasnadaha hawlgabka iyo mu'asassooyinka ayaa maamula hawlaha caymiska hawlgabka shaqada. Xarunta badbaadada hawlgabka (Etk) waxay si gooni ah u qabataa arrimaha la xiriira hawlaha badbaadada hawlgabka.
Hawlgabka shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Hawlgabka kuu aruuray ka fiiri nuqulka waraaqaha hawlgabka shaqada
Hay'addaada hawlgabka ayaa hadba waqti cayiman gudihiis kuu soo diraysa macluumaadka hawlgabka kuu aruuray. Macluumaadka ku qoran waraaqda hawlgabka shaqada ayaad ka arki karaysaa qiyaastii hawlgabka kuu aruuray inta uu le'eg yahay. Sidoo kale waxaad xaafiiskaaga hawlgabka shaqada ama xarunta badbaadada hawlgabka ka dalban kastaa inuu kuu soo diro nuqulka waraaqaha hawlgabka shaqada.
Adigu nuqulka waraaqaha hawlgabka kala soco in halgabka kuu aruuray loo xisaabiyey si sax ah. Haddii macluumaadka ay ku jiraan wax khalad ah, la xiriir xaafiiskaaga hawlgabka shaqada ama xarunta badbaadada hawlgabka. U xafid shahaadooyinka shaqada wax kahubin awgeed. Sidoo kale waxaa wanaagsan inaad xafiddo dhamaan rasiidyada mushaarka lagu siiyey.
Dalbashada dhambalka hawlgabka shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan
Dakhliga howlgabka bulshada iyo dakhliga howlgabka guud
Waxad dalban kartaa dakhliga howlgabka marka aynan kaaga ururin shaqadaada lacag ku filan dakhli howlgab, ama haddii lacagta kuu ururtay ay aad u yartahay. Caddadka hawlgabka bulshadu wuxuu ku xiran yahay hadba inta aad Finland ku nooleyd ama aad ka shaqaysay. Sidoo kale xiriirkaaga qoyska iyo dakhliyada kale ee hawlgabka joogtada ah ayaa saameyn ku yeelanaya inta caddadka hawlgabka bulshada yahay. Kelada ayaa maamusha hawlgabka bulshada iyo damaanad-qaadyada hawlgabka.
Waad codsan kartaa kawlgabka iyo damaanad-qaadka hawlgabka, haddii aad ku jirto xayndaabka Ammaanka bulshada ee Finlanduomen aadana Finland deganeyn ugu yaraan 3 sano kadib markii aad buuxisay 16 sano. Sidoo kale waqtigii, aad ku nooleyd wadan kale oo wadamada EU:da- ama ETA:da ka tirsan,waa la tixgelinayaa qayb ahaan.
Damaanad-qaadka hawlgabku wuxuu qofka hawlagbka ah u damaanadqaadayaa inta ugu yar ee lagu noolaado. Damaanad-qaadka hawlgabka waxaa laga bixiyaa marka la kala jaro hawlgabyada kale ee ku soo gala iyo damaanad-qaadka hawlgabka. Haddii hawlgabyadaada kale marka la isku xisaabiyo ay ka badan yihiin cadada damaanad-qaadka hawlgabka, ma heli kartid damaanad-qaadka hawlgabka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan damaanad-qaadka hawlgabka waxaad ka heleysaa Kelada.
Xaaladaha qaarkood waxaad sidoo kale hawlgabka qaranka heli kartaa ka hor inta aadan buuxin 65 sano. Kelada ayaad ka heleysaa wixii macluumaad dheeri ah ee la xiriira hawlgabka qaranka ee la soo hormariyey iyo maalmaha dheeraadka ah ee hawlgabka qaranka.
Habka hawlgabka ee finnishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Kaamooyinka hawlgabkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macaluumaad ku saabasan arimaha hawlgabnimadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan
Dakhliyada howlgabka oo dhan waa in la dalbadaa. Waxad ka isla dalab ku dalban kartaa dakhliga howlgabka ee guud iyo ka bulshada. Waxad ku buuxin kartaa dalabka internetka waxanad gayn kartaa xafiis kasta oo ay Keladu leedahay, goob kasta oo shaqo oo ay ka tirsan carunta shaqo gabista ama Xarunta Ammaanka Shaqogabista. Goobaha adeegyadaas iyo shabakada internetka ayaad ka heli kartaa warqadaha dalabka dakhliyadaas.
Dakhliga howlgabka ee guud waxad ka dalban kartaa adeegga shabakada internetka ee Kelada ama xafiiska Kelada. Dakhliga howlgabka waayeelnimada ee Kelada iyo dakhliga howlgabka ee guud waxad sidoo kale ku dalban kartaa taleefan. Lambarka u adeegga arrimaha howlgabnimada ee Keladu waa 020 692 202.
Dakhliga howlgabka ee waddanka dibadiisa laga helayo
Haddii aad deganeyd ama aad ka shaqeyn jirtay Finland ka sokoow wadamo kale oo Midowga Yurub ah ama wadamada ay Finland la leedahay heshiishka ammaanka bulshada, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad ka hesho lacagtahawlgab kuwaas. Wadamadan waxaad ka codsan kartaa hawlgabka islamarka aad codsaneyso hawglabka shaqada ama dadka ee Finnishka. Ku lifaaq codsigaada foomka goonida ee Degista iyo ka shaqeynta dibadda. Foomka waxaad ka daabacan kartaa bogagga shabakadda Kelada ama kan Xarunta badbaadada hawlgabka.
Haddii aad ka shaqeysay wadamo aysan Finland la laheyn heshiiska ammaanka bulshada, waa inaad adigu cadeysaa inaad ka heli karto wadamadaas hawlgabka. Haddii helitaanka hawlgabku uu suurtagal yahay waa inaad adigu codsataa.
Xarunta ammaanka hawlgabka ayaa talo kaa siineysa haddii aad dibadda hawlgabka ka codsaneyso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga shabakadda Xarunta ammaanka hawlgabka. Waxaad sidoo kale talo weydiin kartaa Kelada.
Dibadda ka codsashada hawlganka-bandhig(pdf, 429,2 kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Ku bixinta hawlgabka dalka dibadiisa
Hawlgabka shaqada ee dibadda
Haddii ad ka guurto Finland, waxa lagu siinayaa lacagta kuuga ururtay mishaarkaaga ee loogu talogalay wakhtiga howlgabka, marka ad da’daas gaadho. Lacagtaas waxa lagugu siin karaa waddan kasta oo ad joogto. Waxa muhiim ah inaad shahaado shaqo ka haysato dhamman shaqooyinkii aad Finland ka soo qabatay. Sidoo kale waxaa wanaagsan inaad xafiddo dhamaan rasiidyada mushaarka lagu siiyey.
Sida aad u lacagta hawlgabka dibadda uga dalbaneysid, waxay ku xirantahay hadba wadanka aad markaas ku nooshahay. Waxaad talooyin weydiin kartaa xaruntaada hawlgabka ama Xarunta badbaadada hawlgabka. Inta aadan dalban lacagta hawlgabka weydiiso xaruntaada hawlgabka ama Xarunta badbaadaada hawlgabka nuqulka waraagaha hawlgabka shaqada. Nuqulka waraaqaha hawlgabka shaqada waxaad ka arkeysaa, inta hawlgabka Finland kaaga aruuray uu dhan yahay.
Hawlgabka Kelada ee dibadda lagu bixiyo
Ogeysii markasta Kelada haddii aad si joogto ah dibadda ugu guureyso ama aad joogeyso dibadda wax kabadan saddex bilood.
Haddii aad dibadda si ku meelgaar ah u joogeyso, yacni wax kayar sanad, Keladu inta badan si caadi ah ayeey u bixineysaa hawlgabkaada. Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro Keladu waxay ku bixisaa tusaale ahaan hawlgabka qoyska iyo waayeelka wadamada qaarkood xitaa haddii halkaas aad u guurto wax sanad ka badan. Wadamadaas waa tusaale ahaan wadamada kale ee Midowga Yurub, ETA iyo wadamada ay Finland la gashay heshiiska ammaanka bulshada.
Damaanad-qaadka hawlgabka lama bixiyo haddii aad dibadda u guurto wax ka badan sanad.
Bogagga shabakadda Kelada waxaa ku jira macluumaad ka hadlaya marka aad hawlgabka Kelada dibadda ku heli karto. Waxaad sidoo kale xafiiska Kelada ama adeegga telefoonka weydiin kartaa xaaladaada.
Hawlgabk da'da ee qayb ahaanta la soo hormariyey
Haddii aad buuxisey 61 sano, waxaad qayb ahaan noqon kartaa hawlgab ka hor inta aadan gaarin da'da ugu hooseysa ee hawlgabka da'da lagu noqon karo. Tan waxaa loogu yeeraa da'da hawlgabka oo qayb ahaan la soo hormariyey. Adiga ayaa go’aan ka gaaraya in lacagta hawlgabka bishiiba laagaa siinayo 25 % ama 50 % . Haddii aad dooneysid, waxaad si caadi ah u sii wadi kartaa shaqada oo maalintii oo dhan ah ama shaqo bixiyahaaga ayaad heshiin kartaa inaad waqti gaab shaqayso. Sidoo kale shaqada waad iska joojin kartaa. Ogow, in hawlgabka da'da ee qayb ahaanta la soo hormariyey uu si rasmi ah u yareynayo caddadka hawlgabka shaqadaada. Wixii dheeraad ah weydii xaruntaada hawlgabka.
Howlgabka qofka awood beel shaqo ay ku dhacday
Haddii ad muddo dheer xanuunsato, waxad sida caadiga ah helaysaa sanadka ugu horeeya lacagta nololmaalmeedka xanuunka. Haddii xanuunka ama jiisnimo owgeed anad ugu noqon karin shaqo, waxad dalbankartaa dakhliga howlgabka ee qofka awood beel shaqo ay ku dhacday (työkyvyttömyyseläke) ama dakhliga qofka shaqo beelay laakiin dib loo toobabarayo (kuntoutustuki). Dakhliga qofka awood shaqo beelay laakiin dib loo toobabarayo waa dakhli kamid ah dakhliyada awood beelka shaqo, waana mid wakhti cayiman ah. Ka dalbo dakhliga adoow beelka shaqada Kelada adiga oo ku dalbanaya warqada dalabka ee ad ka heshay. Dalabkaaga waa in aad ku lifaaqdaa warbixin dhakhtar oo ah nooca B. Kelada iyo xarunta dakhliyada shaqogabka ayaa cabiraya un ad awooddo in aad shaqayso iyo in ad haysato caawimaad kugu filana oo kaa saacidaya dib u toobabar. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dakhliga qofka awood beel shaqo ay ku dhacday iyo dakhliga qofka dib u toobobar ay ku socotaba waxad ka heli kartaa Kelada, hay'addaada hawlgabka shaqada ama daryeelka caafimaad ee goobtaada shaqada.
Haddii ad qaadanayso dakhliga qofka ay ku dhacday awood beel shaqo, mishaarkaagaa dakhligaas saamaynaya. U sheeg Kelada iyo xarunta dakhliyada shaqogabka haddii ad shaqotagto. Haddii mishaarkaagu uu yahay mid kuus ah bishii, waxad nasin kartaa dakhliga awoodgabka. Taasi micneheedu waxa weeyaan in aad muddo ka qaadanayso fasax ah oo anad lacagtaas qaadanayn. Muddadaasi waxay noqon kartaa ugu yaraan saddex bilood ama ugu badnaan labo sano. Muddada ad dakhligaas nasinayso ma waayaysid xaqqa ad ku helayso dakhliga awoodbeelka shaqada.
Manfacyada kale ee hawlgabka la siiyo
Waxaa hawlgabka dheer oo ay Keladu siin kartaa kuwa dakhligoodu yaryahay ee hawlgabka qaada kaalmada ijaarka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada ijraarka Kelada ee kuwa hawlgabka qaata kala soco bogagga shabakadda Kelada.
Qofka waqti dheer jiran ama naafo ah waxay Keladu siin kartaa kaalmada daryeelka ee qofka hawlgabka qaata. Weydii macluumaad dheeraad ah Kelada.
Qiimo dhimista hawlgabka
Markii aad hawlgab noqotid, waxaad heli kartaa qiimo-dhimista hawlgabka tusaale ahaan tareemada, diyaaraha iyo basaska dalka Finland. Qofka hawlgabka ah ee jiro 65 sano ama ka wayn wuxuu heli karaa qimo dhimis asagoo tusaya kaarka aqoonsiga iyo kan hawlgabka shaqada ama kaarka cadaynaaya qaadashada lacagta hawlgabka qaranka. Xafiiska tigidhada ka hubi shuruudaha qiimo dhimista hawlgabka.
Waxad qiimo dhimis ka heli kartaa tusaale ahaan adeegyada jimicsiga iyo meelaha bandhigyada dhaqameed iyo wax lamid ah lagu qabto.
Eläketurvakeskus: Shaqadaa siyaadisa howlgabka